‘संसद विघटन भएको होइन प्रचण्ड र माधव नेपालको सत्तामा पुग्ने लोभ विघटन भएको हो’ : मन्त्री अर्याल - DonNepal
४ माघ २०७७, आईतवार ०८:१५ DON	0 Comments
काठमाडौ । कृषी तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले संसद विघटन नभई प्रचण्ड र माधव नेपालको सत्तामा पुग्ने सपना विघटन भएको टिप्पणी गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री विरुद्ध षडयन्त्र गरेर सत्तामा पुग्ने लोभमा लागेका कारण अहिले यस्तो अवस्था आएको उनको भनाई छ । शनिवारवाट सुरु भएको अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रिय कमिटिको दोस्रो बैठकको सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले यस्तो बताएकी हुन् ।
पार्टीको अनुशासन नमानेर आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष बिरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गर्दै हिड्ने र आफ्नै राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोग लगाउन भन्दै हिड्ने सांसदको के काम ? उनले भनिन्, विघटन नभएको भए प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई अहिले सम्म फ्याकिसक्थे । सत्ता कांग्रेसलाई सुम्पिने थिए ।
उनले लेनिवादी संगठनात्मक सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएर पार्टी एकता भएका कारण अहिले यस्तो अवस्था आएको बताएकी छन् । प्रचण्डको प्रस्ताव मान्दा संगठन संचालन नै गलत तरिकाले भएको उनको भनाई छ ।
लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तवाट जाँदा आफु अल्पमतमा पर्ने भएकाले प्रचण्डले त्यस्तो प्रस्ताव ल्याएको उनको भनाई छ । माधव नेपाललाई प्रभावित गरेर आफैले पार्टी एकता गर्दा हस्ताक्षर गरेको दस्तावेजको ३ नम्बर बुदा आफै कुल्चिनुभयो उनले भनिन्, कृतिम बहुमत खडा गरेर प्रधानमन्त्री विरुद्ध लागेर दोहोरो चरित्र देखाएका कारण द्धन्द्ध सुरु भयो ।
उनले पार्टीभित्र कहिल्यै सरकार कसरी चलाउने, कसरी एकता कायम राख्ने भन्ने बारेमा कहिल्यै छलफल चल्न नसकेको भन्दै दुख ब्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, भागवण्डामा मात्र नेताहरु लगे । आजको अवस्था सत्ता लिप्साका कारण उत्पन्न भएको हो ।
कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई धुलो चटाउन पार्टी एकता गर्नुभएको हो भनेर आफ्ना नेता प्रचण्डलाई उनका कार्यकर्ताले प्रश्न गरुन््, उनले भनिन् ।
← युवा नेतृ अन्जना अधिकारीको भिम रावललाई प्रश्नः ‘तपाईलाई आफ्नो आमाको मुख हेर्न लाज लागेन ?’
कञ्चन र अनिशाको विषयमा बाहिरियो अहिलेसम्मकै महत्वपूर्ण तथ्य (भिडियोसहित) →
५ पुष २०७७, आईतवार १५:१९ DON	0
नेकपा स्थायी कमिटीमा कसको शक्ति कति?
५ पुष २०७७, आईतवार १९:०४ DON	0
अहिलेसम्म कुनै गुटमा नलागेका वामदेव गौतमले अन्त्यमा दिनेछन यस्तो ‘सरप्राइज’
९ पुष २०७७, बिहीबार १८:४२ DON	0